थाइराइड के हो, कसरी बच्ने ? यस्ता हुन्छन लक्षणहरु, पढेपछि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला - ज्ञानविज्ञान
बढ्दो व्यस्तता, भागदौडको तनावपूर्ण जिन्दगी अनि अस्वस्थ खानपानले पछिल्लो समय मानिसमा रोग बढिरहेको छ । जीवनशैलीमा आएको अस्वस्थ परिवर्तनका कारण अहिले हरेक मान्छेमा केही न केही स्वास्थ्य समस्या भएकै हुन्छ । कसैलाई डायबिटिज, कसैलाई प्रेसर, कसैलाई मोटोपन त कसैलाई स्ट्रोक ।
जीवनशैलीका कारण इन्डोक्राइन डिसअर्डर बढिरहेको छ, यसले मधुमेह र थाइराइडको समस्या देखिन थालेको छ । थाइराइडको समस्या अहिले नेपाली समुदायमा देखिएको प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो । नेपालमा हुने मृत्युमध्ये ०.२ प्रतिशत इन्डोक्राइनमा हुने उतारचढावका कारण हुने चिकित्सक बताउँछन् । इन्डोक्राइन हुनुमा आयोडिनको कमी प्रमुख कारण मानिन्छ । नेपाल स्थायी रूपले नै आयोडिनको कमी हुने मुलुकमा पर्छ ।
थाइराइड शरीरको एक ग्रन्थी हो । हाम्रो शरीर करोडौँ कोष मिलेर बनेको हुन्छ । ती कोषको विकासमा थाइराइड हर्मन अत्यावश्यक हुन्छ । थाइराइड हर्मोनविना बाँच्न नै असम्भव हुन्छ ।
शरीरका कोष तथा तन्तुलाई विकास र परिपक्व बनाउने थाइराइड सबै मानिसमा हुन्छ । यसकारण थाइराइड हुनु समस्या होइन । तर, थाइराइडमा आउने उतारचढाव समस्या हुन सक्छ ।
जब थाइराइड हर्मोन उत्पादनमा उतारचढाव आउन थाल्छ, तब समस्या देखिन थाल्छ । शरीरमा धेरै मात्रामा थाइराइड हर्मोन हुने अवस्थालाई हाइपरथाइरोइडिजम् भनिन्छ ।
त्यस्तै, कम मात्रामा हर्मोन उत्पादन हुनु हाइपोथाइरोइडिजम् हो । थाइराइडलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को ग्रन्थी टाउकोमा हुन्छ, जसलाई ‘पिट्युटरी’ भनिन्छ । पिट्युटरीको नियन्त्रणमा रहेर थाइराइडले हर्मोन उत्पादन गर्छ । पिट्युटरीबाट आउने ‘थाइराइड स्टिमिलेटिङ हर्मोन’ (टिएसएच) का कारण थाइराइड ग्रन्थीले ‘टि–थ्री’ र ‘टि–फोर’ नामक हर्मोन उत्पादन गर्छ ।
थाइराइड ग्रन्थीमा गाँठा बन्छन् र थाइराइड हर्मोनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसले शरीरको केमिकल सन्तुलनलाई बिगार्न थाल्छ । केही भागमा यस्ता धेरै गाँठा हुन्छन् ।
थाइराइडमा हुने जलनले ग्रन्थीबाट धेरै हर्मोन चुहावट हुन थाल्छ, जसले अस्थायी रूपमा हाइपरथाइरोइडिजम् सिर्जना गर्न सक्छ । सामान्यतः यो केही हप्तामा समाप्त हुन सक्छ तर कहिलेकाहीँ महिनौँसम्म पनि भइरहन सक्छ ।
थाइराइड ग्रन्थी हटाउने
थाइराइड ग्रन्थी शल्यक्रिया गरेर हटाइएको वा केमिकल प्रयोग गरेर नष्ट गरिएको हुन सक्छ ।
आयोडाइडमा अत्यधिक असर पर्नु
रुघाखोकी र साइनसका औषधि, मुटुको औषधि लगायतले हाम्रो शरीरमा हुने आयोडिनमा अत्यधिक मात्रामा असर पारेको हुन सक्छ । विगतमा पनि थाइराइडको समस्या भएमा हाइपोथाइरोइडिज्मको जोखिम बढ्छ ।
घरेलु उपचार कसरी गर्ने ?
दैनिक सूर्य स्नान, योग ध्यान, तथा अन्य व्यायाम गर्ने
तनाव व्यवस्थापन समयमा नै गर्ने,
मनलाई पवित्र बनाउने
Don't Miss it हेर्नुहोस् त काचो प्याजले यी रोगहरुबाट कसरी बचाउछ ? पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
Up Next तितो करेलाले कस्ता रोगहरु निको पार्छ ? थाहा पाईराख्नुहोस् !